West Ham oo Soo Gashay Kaalinta Afaraad ee Horyaalka Ingiriiska “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda West Ham United ayaa soo gashay kaalinta afaraad ee horyaalka ingiriiska,ka dib markii ay galabta garoonkeeda Upton Park 3-1 uga badisay kooxda Swansea City.
Kooxda Swansea ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 19-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Wilfried Bony.
Ciyaaryahan Andy Carroll ayaa dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta gool barbardhac ah u dhaliyay kooxda West Ham United.
Ciyaaryahan Andy Carroll ayaa daqiiqadii 66-aad ee ciyaarta gool labaad u dhaliyay kooxda West Ham United.
Kooxda Swansea City ayaa waxaa daqiiqadii 69-aad ee ciyaarta kaarka casaanka ah ka qaatay gool haye Lukasz Fabianski,ka dib markii uu qalad ku galay banaanka xariijinta 18-ka.
Ciyaaryahan Diafra Sakho oo bedel ku soo galay ciyaarta ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda West Ham United.
Kooxda West Ham United ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska ka soo gashay kaalinta afaraad,waxana ay leedahay 27-dhibcood,halka kooxda Swansea City ay horyaalka uga jirto kaalinta sideedaad,iyadoo leh 22-dhibcood.
James Rodriguez oo Dhaawac uga Maqnaan Koobka Naadiyada Aduunka